Myanmar Website Creator - Single plans
Current position : Service - Single Service
Homepage Producing Only
အကယ်၍ သင်သည်homepage တစ်ခုသာပြုလုပ်လိုပြီး web server ပေါ်တင်ခြင်းကိုမူ သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်မည် ဆိုပါကလည်း Myanmar Website Creator မှ ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည် Homepage တစ်ခုတွင်
Input form (website မှ message ပေးပို့ရန်, ဥပမာ)
Top page picture
Google maps (သင့်ကုမ္ပဏီ၏ တည်နေရာ ကိုညွှန်ပြရန်
Basic SEO measures တို့ပါဝင်ပါသည်။
Homepage တစ်ခုတည်းသာ ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ကျသင့်ငွေမှာ All in One Service ရှိ original homepage ပြုလုပ်ခြင်း၏ ဝန်ဆောင်ခ အပြင်၁၀၀% အပိုကြေးပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ (All in One Service ရှိ မူရင်း homepage ပြုလုပ်ခြင်း၏ ကျသင့်ငွေ ကိုကြည့်ရန် )
Fee 400,000Ks 580,000Ks 980,000Ks 1,380,000Ks
Homepage တစ်ခုတည်းသာ ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ကျသင့်ငွေမှာ original homepage ပြုလုပ်ခြင်း၏ ဝန်ဆောင်ခ အပြင်၁၀၀% အပိုကြေးပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
Html ဖိုင်တစ်ခုလျှင် စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာ အဖြစ်ရေတွက်ပါသည်။အကယ်၍ စာမျက်နှာ သည် A4 size ထက်ပိုရှည်ပါက ထိုအပိုင်းကို စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာအဖြစ် ရေတွက်ပါသည်။
သင့်တွင် homepage ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ hosting ဝန်ဆောင်မှုကိုသာ အသုံးပြုလိုပါကလည်း Myanmar Website Creator မှဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် သင့်အား web hosting service ကိုဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ Web hosting service တွင်
Registeradomain for you.
Upload all the stuffs into server.
Open email account for you.
Basic support (change email address/password, minor change for homepages, etc)
web hosting အတွက်ကျသင့်ငွေမှာ သင့်website ၏ နေရာသုံးစွဲမှုပမဏ နှင့် email accounts ပေါ်မူတည် ပြီးနှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းရပါမည်။ (Web hosting plan အားအသေးစိတ်ကြည့်ရန်)
အကယ်၍ သင်သည် website တစ်ခုကိုမလိုအပ်ဘဲ မူရင်းဒိုမိန်း(original domain) ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော email account တစ်ခုကိုသာလိုအပ်သည် ဆိုပါကလည်း Myanmar Website Creator မှ ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် သင့်အား email account service ကိုဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဒိုမိန်းအတွက်ကျသင့်ငွေ ၅၀ ၀၀၀ ကျပ်(တစ်နှစ်လျှင်)
Email account တစ်ခုအတွက်ကျသင့်ငွေ ၁၀ ၀၀၀ ကျပ်(တစ်နှစ်လျှင်)
Disk space about 7GB / per account
(Promotion ကာလအတွင်းစာချုပ် ချုပ်ဆိုပါက)
အကယ်၍ သင်သည် original domain ကိုမလိုအပ်လျှင် သင့်အားကျွန်ုပ်တို့၏ domain ဖြင့်email account အားဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။(e.g. yourname@myanmarwc.com, "yourname" can be any words you like)